असार २१ गतेबाट यो एक राशिको भाग्य चम्क`नेछ, अन्य ११ राशीले यस्तो काम गर्नु`होस ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Horoscope/असार २१ गतेबाट यो एक राशिको भाग्य चम्क`नेछ, अन्य ११ राशीले यस्तो काम गर्नु`होस !
असार २१ गते गुरु पुर्णिमा । “अज्ञान तिमि`रांधश्च ज्ञानांजन शलाकया,चक्षुन्मी`लितम तस्मै श्री गुरुवै नमः ” आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको पुर्णिमालाई गुरु पूर्णिमा वा व्यास पूर्णिमा भन्ने गरिन्छ । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको महान पर्वका रुपमा यसलाई श्रद्धा`पुर्वक मनाउने गरिन्छ । आफुलाई शिक्षा –दिक्षा दिने गुरुहरुप्रति श्रद्धा प्रकट गर्दै यस दिनलाई मनाउने चलन छ ।
मानव जीवनमा गुरुको महिमा असाध्यै रहेको हुन्छ । जीवनको अज्ञा`नरुपी अन्धकारलाई हटाई ज्ञानरुपी प्रकाश प्रदान गर्ने गुरुको महिमा र श्र`द्धा प्रकट गर्ने दिन परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको पुर्णि`मालाई गुरु पूर्णि`मा वा व्यास पूर्णि`मा भन्ने गरिन्छ । आषाढ महिनाको पू`र्णिमामा व्यास ऋषिको जन्म दिन भएकोले यसलाई गुरु पूर्णिमा वा व्यास पूर्णिमा भनिएको हो ।
व्यास ऋषि चारै बेदह`रुको व्या`ख्याता हुन् । उनले वेदको ज्ञान प्रदान गरेका थिए । यिनै बेदका रचियता एव व्याख्या`ताको आदिगुरु ब्यास ऋषिको अंश स्वरूप आफ्ना गुरुहरुलाई मान्दै गुरु पुर्णिमाका दिन पुजा एव दान –दक्षिणा प्रदान गर्ने गरिन्छ । हिन्दु धर्ममा गुरुलाई भगवान भन्दा पनि माथिको दर्जा दिई`एको हुनाले पनि गुरुको महिमा र श्रद्धा प्रकट गर्ने दिनका कारण गुरु पुर्णिमाको महत्व बिशेष रहेको हो । जीवनमा गुरुको महत्व धेरै रहन्छ । ‘गु’ को अर्थ हुन्छ अंधकार (अज्ञान) एवं ‘रु’ को अर्थ हुन्छ प्रकाश (ज्ञान)।
गुरुले अज्ञान रूपी अंधकार बाट ज्ञान रूपी प्रकाश को तर्फ लिएर जाने हुदा भावी जीवनको निर्माणमा गुरू द्वा`रा नै मार्ग दर्शन हुने भएकोले गुरु जीव`नमा अपरि`हार्य हुन्छ । गुरु पूर्णिमाको अवसरमा गुरुहरुको सम्मान गर्ने गरिन्छ । यस अवसरमा बि`ध्यालयहरु र आश्र`महरुमा गुरुहरुका लागि पूजा-पाठ गर्न विशेष कार्यक्रमको आयोजन गर्ने गरिन्छ ।
यस दिनमा विभिन्न क्षेत्रमा आफुलाई शिक्षा दिने तथा महत्व`पूर्ण योग`दान दिने वाला गुरु एव विभूति`हरुलाई स`म्मानित गर्ने गरिन्छ । यस दिन गुरुको नामबाट दान-पुण्य गर्ने प्रचलन पनि छ । मनु स्मृतिका अनुसार, केवल वेदहरु`को शिक्षा दिने मात्र गुरु हुदैनन । जीवनमा जसले सहि मार्गदर्शन गर्दछन् उ जो कोहि भए पनि उसलाई गुरु समान सम्झनु पर्दछ ।
त्यस कारणले गर्दा पनि गुरु पुर्णि`माको बिशेष महत्व रहेको छ । गुरु पुर्णिमाको दिन देखि एक राशिको सबै कामहरु बनेर जानेछ ।धनु राशिको सबै समस्याहरु समाधान भएर जानेछन् । तपाईले पहेँलो वस्तु लुगा वा फल गुरुलाई दिनुहोस । त्यसपछि तपाईको भाग्य उदय हुनेछ । तपाईको भाग्य उदय हुनेछ ।